BAYDHABO, Soomaaliya - Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada Soomaaliya, ayaa heshiis ku saabsan sida ay u qeybsanayaan Khayraadka dalka ku saxiixday magalaada Baydhabo intii uu socday Shirkii Gollaha Amniga Qaranka.
Heshiiskan oo ah mid siyaasadeed, oo aan lagu soo darin qodobada dastuuriga ee ku qornaa War-murtiyeedka ayaa waxaa lagu cadeeyay saamiga maamul iyo degmo kasta ku yeelan doonto Khayraadka Shidaal ku jira dalka.
Shaxda Wadaagga Dakhliga Shidaalka:
Dowladda Federaalka Soomaaliya: 55%
Dowlad Goboleedka Shidaalka laga soo saarayo: 25%
Dowlad Goboleedka aan Shidaalka lahayn: 10%
Degmada Shidaalka laga soo saarayo: 10%
Wararka ayaa sheegaya in Heshiiskan ayaa gadaal ka riixayaan Shirkado shisheeye, oo horey dowladda kula jiray heshiis ku saabsan Shidaal-baarista kuwaasi oo ay ku lug-leeyihiin qaar kamid ah madaxda sare ee dalka.
Qoraalka Heshiiska Wadaagga Dhakhliga Shidaalka iyo Macdanta:
Heshiiska madaxda maamulada Soomaaliya iyo dowlada goboleedyada saxiixeen ayaa u qoraa sidatan:
Qoraal kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Shirka Baydhabo uu yahay...
Madaxweyne Lafta Gareen oo markii ugu horeysay ka hadlay xariga Roobow
Soomaliya 20.01.2019. 23:28
Farmaajo oo Baydhabo kula kulmay Odayaasha Dhaqanka KG [Sawirro]
War Saxaafaded 17.01.2019. 23:07